Ary ahoana ny amin'ny hafanana amin'ny ririnina? Ireo "vondrona atahorana indrindra" ireo dia tokony handinika tsara
Vovoka ho an'ny tsindrona
Vahaolana / Syrup
Vovoka ho an'ny fampiatoana am-bava / Granule
Milatsaka ny ankizy
Fihintsanan'ny maso / hosotra-mason-tsakafo / hafafiny sy ny hafa
Vokatra sakafo mahavelona
Loharano: tambajotra ara-pitsaboana 100
Nahoana no mety hiteraka hafanana hafanana ambany?
Iza no tena atahorana ho voan'ny hafanana?
Ny zokiolona, ​​ny zazakely, ny ankizy, ny marary saina ary ny marary mitaiza no tena mora voan'ny hafanana. Mandritra izany fotoana izany, dia tokony homarihina fa ny fitsaharana ara-batana mavesatra na ny fanatanjahan-tena mahery vaika amin'ny toetr'andro ambany dia mety hitarika amin'ny hafanana ambany ary mety ho faty mihitsy aza ho an'ny tanora salama.
Ahoana ny fomba hanehoana ny tontolo iainana mafana?
Ny hafanana dia azo zaraina amin'ny hafanana malefaka sy mahery. Ny hafanana malemy dia miavaka amin'ny fanina, ny aretin'andoha, ny fivontosana, ny hetaheta, ny tsemboka be loatra, ny havizanana ankapobeny, ny fitempon'ny fo, ny fitempon'ny fo haingana, ny tsy fitandremana, ny fepetra tsy voarindra, sns.
Raha misy toetr'andro ambany hafanana, rehefa tsemboka ianao ary ao anaty trance, dia tokony hitandrina ny hatsiaka ianao. Raha toa ka misy famantarana ny torana eo ambany mari-pana, ny mpiasa torana dia tokony ho entina avy hatrany any amin`ny toerana misy rivotra sy mangatsiatsiaka, ary ny hafanan`ny vatan`ny mpiasa torana dia ahena amin`ny alalan`ny fandatsahana rano mangatsiaka eo ambaniny. Avy eo, ny fiovan'ny hafanan'ny vatana dia tokony hojerena tsy tapaka. Raha mitohy ny tazo mahery eo amin'ny 40 ℃ eo ho eo, dia halefa avy hatrany any amin'ny hopitaly izy io mba hahazoana fitsaboana famotsorana rano. Voarara tanteraka ny mieritreritra fa ny hafanana amin'ny ankapobeny sy ny tsy firaharahiana dia hanemotra ny fotoana fitsaboana.
Dingana fanampiana voalohany amin'ny antsipiriany
Ny olona maivana dia tokony handeha haingana any amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy be rivotra mba handry amin'ny lamosiny mba hiasa, hamaha ny bokotra sy ny fehikibony ary hanidy ny akanjony. Afaka maka shidishui, Rendan ary fanafody hafa izy io mba hisorohana ny areti-mifindra.
Raha toa ka mampiseho fisafotofotoana na spasm ny marary, alao ny toerana torana amin'izao fotoana izao. Eo am-piandrasana ny vonjy taitra, tandremo tsara mba hiantohana ny fandaozana lalan-drivotra.
Ahoana no hisorohana ny hafanana?
Sakafo sy asa
Rehefa ilaina ny fanatanjahan-tena an-kalamanjana dia mifidiana akanjo sy pataloha tsy misy dikany, malalaka ary mazava, tandremo ny fiarovana amin'ny masoandro sy ny fampangatsiahana, manaova saron-tava sy solomaso, ary manosotra SPF15 na mihoatra.
Manaova fanatanjahan-tena an-trano amin'ny andro mangatsiaka. Raha mamela ny toerana dia velomy ny aircon. Ny fampiasana mpankafy dia afaka manamaivana vetivety ny fahatsapana hafanana. Raha vao tafakatra mihoatra ny 32 ℃ ny mari-pana, dia tsy hisy fiantraikany firy amin'ny fampihenana ny kapoka hafanana ny mpankafy. Ny fanasana ny tavanao amin'ny rano mangatsiaka, ny famafana ny vatanao, na ny fijanonana ao amin'ny efitrano misy rivotra no dingana mangatsiaka indrindra. Avelao ny vatako ho zatra tsikelikely amin'ny fandeferana amin'ny hafanana ambany.
Ny fomba tsara indrindra hisorohana ny hafanana dia ny mangatsiaka
Amin'ny toetr'andro mafana, ny fanovana sarotra sasany amin'ny rano fisotro, fanatanjahan-tena ary akanjo dia afaka misoroka ny hafanana ary mifikitra amin'ny fahasalamana.
Antimalarial zava-mahadomelina , Veterinary Drug Companies , Veterinary Fitsaboana , Veterinary Antibiotics , Ny anaran'ireo Antibiotics , Antibiotics fanafody ,